« Ny hampanjaka an’i Kristy no maha kristianina antsika… » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera il y a 5 heures
Fanovana mankaiza marina ! il y a 5 heures
Tsy mihena ny faktioran’ny jiro sy rano hoy ny mpanjifa il y a 11 heures
Sarotra ny nenti-manana il y a 11 heures
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 1 jour
Tapaka lava e il y a 2 jours
Faire entendre la voix du milliard d'apprenants victimes de la pandémie Covid-19 il y a 2 jours
Notokanana ny televiziona katolika voalohany eto Madagasikara il y a 3 jours
10 453 858 118 Ariary enti-miasa ho an’ny taona 2021 il y a 6 jours
« Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » il y a 6 jours
« Ny hampanjaka an’i Kristy no maha kristianina antsika… »
Mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin’ny www.lakroa.mg sy ny ekipan’i Lakroan’i Madagasikara. Indro famoaboasana ny tenin’ny Soratra Masina natao hanampy anao hiomana amin’ny Lamesa ny alahady 22 novambra izao. Entina mamakivaky herinandro vaovao. Koa samia ho tahin’Andriamanitra e.
Alahady 22 novambra 2020
Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Kor. 15, 20-26a. 28; Mt 25, 31-46
Alahady farany amin’ny taona litorjika, taona A, ity Alahady ity. Fety fankalazana an’i Jesoa Kristy Mpanjakan’izao tontolo izao ihany koa ny Alahady farany amin’ny taona litorjika. Mifarana ihany koa ny famakîna ny evanjelin’i Md Matio isan’Alahady. Ny evanjely renesintsika androany àry dia maneho an’i Jesoa Kristy Mpanjaka sy Mpitsara ary Mpiandry Ondry tsara.
Amin’ny fiafaran’izao tontolo izao, hoy ny evanjely, dia hiseho amim-boninahitra lehibe i Jesoa Kristy, otronin’ny anjely rehetra, hipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny. Izy no ilay « Zanak’olona » andrandrain’ny firenena rehetra. Mariky ny maha Mpanjaka Azy ny « seza fiandrianan’ny voninahiny » sy ny fanotronan’ny Anjely rehetra Azy.
« Ho voriana eo anatrehany ny firenena rehetra ». Manambara ny fitsarana ny tany rehetra amin’ny andro farany (na farandro) izany. Jesoa Kristy no Mpitsara lehibe. Samy ho voriana ho amin’ity fitsarana farany ity avokoa ny olona avy amin’ny firenena rehetra. Manambara ny maha Mpiandry Ondry an’i Jesoa Kristy ihany koa izany famoriam-bahoaka izany; indrindra ny fanavahany ireo nanao ny tsara sy ireo tsy nanao izany; mova tsy toy ny mpiandry manavaka ny ondry amin’ny osy. Fanatanterahana ny tenin’i Ezekiela mpaminany hoe: « Indro Aho hitsara, manavaka ny reniondry sy ny reniondry; manavaka ny ondrilahy sy ny osilahy » (Vakiteny voalohany).
« Avia ianareo, ry nohasoavin’ny Raiko… ». Teny mamy milaza antso, antso manambara fanasana, fanasana maneho sahady ny hasambarana omeny an’ireo nanao ny tsara. Handova ny Fanjakana izay voavoatra ho azy ireo hatrizay nahariana an’izao tontolo izao izy ireo. Valisoa, tsy noho ny nataon’izy ireo tamin’Izy Tompo akory, fa noho ny nataon’izy ireo tamin’ny anankiray amin’ireo rahalahiny kely indrindra; ireo noana sy ireo nangetaheta; ireo mpivahiny sy ireo tsy nitafy, ireo narary sy ireo tany am-ponja. Valisoa noho ny “asa famindram-po” ara-batana nataon’izy ireo…
« Mialà amiko ianareo, ry voaozona… ». Mifanohitra amin’ny tetsy ambony kosa ny teny sy ny antso ho an’ireo tsy mba nanao izany. Tsy mba hasambarana no miandry azy ireo fa « afo mandrakizay izay voavoatra ho an’ny demony sy ny anjeliny ». Voaozona izy ireo fa tsy nanao ny tsara. Voaozona izy ireo kanefa tsy nanao ratsy ihany koa. Tsy hoe noho izy ireo tsy naneho fitiavana Azy Tompo no nanamelohana azy ireo, fa noho izy ireo tsy nanao na inona na inona tamin’ireo mijaly sy sahirana. Tsy nahita ny endriky ny Tompo tamin’ireo karazan’olona tanisain’i Jesoa ireo. Sady tsy nanao ratsy azy ireo nefa tsy nanasoa azy ireo ihany koa…
Efa hatrany am-piandohana ny Eglizy no nandray ity fampianarana momba ny fitsarana farany ity ho toromarika hoenti-miaina ny asa famindram-po (oeuvres de miséricorde), ka misy fito izy ireo: ny manome sakafo ireo noana, manome rano ireo mangetaheta, ny mamangy ny marary, ny mampiantrano ireo mpivahiny, ny mampitafy ireo rovi-damba, ny mikarakara ireo voafonja ary ny mandevina ny maty. Tsy sanatria filan-dera na fitadiavan-tombontsoa no nanaovana izany fa fandraisana sy fanatanterahana ny tenin’i Jesoa hoe: « isaky ny nanao izany tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto ianareo, dia nanao izany tamiko ».
Amin’izao androntsika izao dia mbola manohy manao ireny asa fiantrana ireny ny Eglizy, amin’ny alalan’ireo fikambanana masina maro samihafa; toraka izany koa ny fikambanan-drelijiozy sy ireo mpanokantena ho an’ny Tompo ary ireo kristianina lahika tsara sitrapo. Ny mahita ny endrik’i Kristy amin’ireny madinika karakaraina ireny no manentana azy ireo amin’izany. Izany no entina mampanjaka an’i Kristy. Tsy ireo antokon’olona ireo ihany anefa no mikarakara ny mahantra fa eo ihany koa ny fanjakana, ireo fikambanana tsy miankina amin’ny Fiangonana na amin’ny fanjakana. Mbola fomba entina mampanjaka an’i Kristy ihany koa izany.
Enga anie mba samy ho entanin’ny fahitana ny endrik’i Kristy Andriamanitra ao amin’ny madinika sy ny mahantra izy rehetra ireny ka any am-parany any dia samy ho antsoin’i Kristy Mpanjaka hoe: « Avia ianareo, ry nohasoavin’ny Raiko ».
Ry Jesoa ô, mba manjakà ao am-poko mandrakizay.
Congrégation de la Mission : Diakra: mpanao ny raharahan’i Kristy fa tsy fonksionera - il y a 5 heures
Matoan-dahatsoratra : Fanovana mankaiza marina ! - il y a 5 heures
Teny Mahavelona : « Mibebaha: Ny tarehy ratsy no tsy azo ovàna fa ny toetra ratsy azo ovàna » - il y a 6 jours